पनौती जलविद्युत गृह अब शैक्षिक ग्रामको रुपमा - Arthakoartha.com
पनौती जलविद्युत गृह अब शैक्षिक ग्रामको रुपमा
काठमाडौं, जेठ १० । रुस सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको काभ्रेको खोपासीमा रहेको २.४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत गृह अब शैक्षिक अध्यायन स्थलको रुपमा विवकास गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. रामकण्ठ मकाजू श्रेष्ठले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एमओयूको म्याद १० वर्षसम्म रहने छ। दुवैपक्षको सहमतिमा एमओयूको म्याद थप्न सकिने र तीन महिनाको सूचना दिएर एमओयु खारेज गर्न पनि सकिने व्यवस्था एमओयूमा गरिएको छ।
यस समझदारी सँगै विश्वविद्यालयले सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल जलविद्युत लगायतका इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालनका लागि विद्युत गृहको स्वामित्वमा रहेका संरचना र जग्गाको प्रयोग गर्ने छ। विद्युत गृहका टर्बाइन, जेनेरेटर, नहर लगायतका संरचनाको सुदृढीकरण विश्वविद्यालयले आफ्नै खर्चमा गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरण र विश्वविद्यालयले ज्ञान तथा सीप साटासाट गर्न संयुक्तरुमा तालिम, सम्मेलन, कार्यशाला, शैक्षिक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनबाट नाफा प्राप्त भएमा त्यसको १० प्रतिशत प्राधिकरणले पाउने व्यवस्था समझदारी पत्रमा गरिएको छ ।
सरकार र तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पनौती विद्युत गृहको निर्माण भएको थियो। विद्युत गृह ३१ असार २०२२ बाट सञ्चालनमा आएको थियो। विद्युत गृह अहिले जीर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ।
यस्तै प्राधिकरणले फर्पिङ, सुन्दरीजल जस्ता ऐतिहासिक विद्युत गृह विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कोरोना उपचार कोषमा कसको कति सहयोग ?
बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योग आधा क्षमतामा सञ्चालन
विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’मा नेपाल १६ औं स्थान माथि उक्लियो